Ihe kpatara anyi ji choro Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ọ bụ ezie na ịka nká na-apụghị izere ezere, enwere atụmanya nke ịmegharị usoro ahụ, maka Nicotinamide Mononucleotide (NMN). Ibi ndu tozuru oke bu ihe onye obula choro ma enwere ogugu dika NMN nke n’enye ayi aka iru nro.
Amaara m na ị nwere ike ị na-eche etu ụlọ ọrụ a si emetụta ịka nká. Ọfọn, jide egbe gị n'ihi na m ga-ewere gị site na uru nicotinamide mononucleotide.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) bụ ihe ntụgharị nke NAD +. NAD + bụ ihe dị mkpa na ndụ mmadụ na sel. Ka anyị na-abawanye na afọ, kemịkal a na-agbadata n'ihi ọtụtụ ọrụ enzymatic. Ihe ọzọ bụ na, ọnụego ihe a na-eji eme ya bụ oge niile na-ezighi ezi na ogo nke mmepụta.
Otu ihe dị mkpa ịmara bụ na, n'adịghị ka ọtụtụ ọgwụgwọ ịka nká na-eme ka ị ghara inwe mgbaàmà na-enweghị ike, NMN mmetụta na-esote null. Kwe ka m kọwaa ihe NMN na-emetụta ndụ gị.
Gịnị bụ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide (Nmn) ntụ (1094-61-7) na-enweta site na niacin. Ọ bụ ngwaahịa site na mmeghachi omume n'etiti nicotinamide ribose na otu phosphate. Lọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na biosynthesis nke NAD + (nicotinamide adenine dinucleotide), nke bụ ihe dị mkpa na ọrụ biochemical cellular.
Na njikọ nke NAD +, Nicotinamide Mononucleotide nnukwu ntụ ntụ na-arụ ọrụ dị ka mkpụrụ maka nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, nke bụ enzyme na-ahụ maka ịtụgharị ya na NAD +.
NMN bụ otu isi mmalite nke ike cellular n’ime ahụ mmadụ. Ebe obu uzo uzo NAD +, odida n’otu uzo gha adabacha nke ozo.
Na nyocha izizi ndị mere n'oge gara aga, Nicotinamide Mononucleotide ekwenyela na ọ dị ezigbo mkpa na ngalaba ọgwụgwọ. Otu ihe pụtara ìhè mepụtara bụ mmezu nke nnukwu ihe ọrụ ahụ dị na ntughari afọ ime na igbochi usoro ịka nká.
N'oge na-adịbeghị anya, enwere nnyocha na-ekwe nkwa banyere nchịkwa kansa cancer nicotinamide mononucleotide.
Kedu nri nwere Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Wisepower nwere ikike imepụta nnukwu ihe nke NMN na ntụ ntụ NR,
ikike imepụta kwa ọnwa dị elu 2,000KG.
Gini bu uru Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ga ekwenyere m na ịka nká na isi awọ nwere amamihe. Agbanyeghị, ọ theụ nke maxim a adịtela aka ma ị malite inwe okenye. Ka anyị na-aga n’ihu, ahụ anyị na-agbanwe gaa na ndọta ọrịa.
Oge agadi na-ahapụ nnukwu mmetụta na ọrụ cellular. Dịka ọmụmaatụ, ọkwa NAD + na Nicotinamide Mononucleotide na-alaghachi azụ n'oge afọ ọlaedo. Agbanyeghị na anụ ahụ na - eme kemịkal, ọnụego oriri kacha karịa ugboro ole a na-eme ka ọ dị ọhụrụ.
N'ihe banyere mbibi DNA, NAD + na - eme ka PARP1, protein na - edozi DNA, iji weghachi akụkụ ahụ metụtara.
Mbechondria dị na NMN na-emetụta ọkwa NAD + ma mesịa na-eduga na mbelata nke mmepụta ume site na mitochondria.
Nnyocha ọmụmụ nke Dr. Sinclair, bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa si Mahadum Havard, kwadoro arụmọrụ nke ihe mgbakwunye nicotinamide mononucleotide na-eme ka ịka nká belata. Ọkà mmụta ahụ kwetara na ya na nna ya na-a theụ mgbakwunye a ma ọ na-eme ka ncheta dịkwuo mma ma mee ka uche ha dịkwuo nkọ.
Ọdịda nicotinamide adenine dinucleotide nwere ike ịkpalite ụdị shuga II.
Nchịkwa Nicotinamide Mononucleotide ga-eme ka glucose na-ekweghị ekwe na insulin nwee uche nke ọma na ndị ọrịa nwere ọrịa shuga. E wezụga nke ahụ, ụfọdụ ndị na-amụ banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa gosiri na ọgwụgwọ ahụ na-agbanwe mkpụrụ ndụ ihe nketa nke sitere na nri nwere abụba dị elu.
Mgbe ogo adinine dinucleotide nke nicotinamide dara, ọnọdụ uche dị na nsogbu.
Ijikwa NMN na-ebuli oke nke NAD +, ya mere na-echebe ụbụrụ na mmebi. Na nkenke, Nicotinamide Mononucleotide na-erite uru neuronal ọrụ na cognition, gụnyere, mmụta, na ebe nchekwa.
Maka nke a, a na-eji ọgwụgwọ ahụ jikwaa ọrịa Alzheimer, ọrịa Parkinson, dementia.
Udiri akwukwo ihe omumu banyere ihe ndia uru nicotinamide mononucleotide site na nkwenye na mmeju ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na mmebi intracerebral. Mgbe ndị na-eme nchọpụta nyere ọgwụ ahụ n'ihe oke bekee ochie, ihe ọmụmụ ndị a debara aha ha n'ọtụtụ mmepe na NAD + intracerebral. N'ihi ya, mbelata nke ọrịa bechemic na ọnya ụbụrụ na-esote ya.
Metabolism ka mma
Omume NMN kachasị mma n'ime ahụ na-eme ka mmụba na NAD +, nke na-achịkwa ọrụ ike metabolic, mmezi nke DNA, na nzaghachi na nrụgide. Ebe ọ bụ na Nicotinamide Mononucleotide na-emetụta metabolism, ụkọ ya ga-akpalite ọtụtụ ọnọdụ metabolic dị ka oke ibu, ọrịa shuga, imeju abụba, na dyslipidemia.
N'ihe banyere glucose anabataghị, NMN na-abanye n'ime ka ọrụ metabolism sie ike.
Nchoputa gosiputara na inwere ike itufu aru gi kariri 10% ma oburu I were NMN. Dị ka Dr. Sinclair si kwuo ya, mmetụta otu mkpụrụ ọgwụ NMN na-a forụ maka ụmụ mmadụ na ịbanye n'okporo ụzọ.
Chefue ihe dị ka tọn nke ihe etemeete na ịwa ahụ nke na-eme ka ị ghara inwe oke elu.
Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo ya, anyị dị agadi dị ka akwara art. Site na nkwupụta a, ị nwere ike ịchọpụta na iweghachite akwara na akwara nke arịa ọbara anyị ga-arụ ọrụ ahụ na ndụ anyị.
Ihe kacha dị iche na - ekewa ntorobịa na agadi bụ nkenke na ntachi obi. Ọ bụ ezie na ihe ndị a niile na-aka mma site na iji mmega ahụ oge niile, senescence na-emegide ihe adịghị mma na akwara anụ ahụ na-ebelata ebe usoro ọbara na-agbadata n'ime usoro ndị a.
Kwe ka m kọwaa site na sayensị. Mgbe mkpụrụ ndụ endothelial na-ata ahụhụ na protein nke Sirtuin1, usoro ọbara ga-agbadata. Ikwesiri ighota na NMN bu onye nlebara anya nke SIRT1. Ya mere, ijikwa ihe mmezi a ga - eme ka njiri mara ọhụụ, nke ga - ewepụta ihe ọhụụ iji nye oxygen na nri nye akwara na akụkụ ahụ ndị ọzọ dị mkpa.
Yabụ, kedu ihe ọ bụ gbasara nicotinamide mononucleotide vs riboside?
Odi nma, ha abuo na uzo uzo NAD.
Ilele site na ngwa ha na kemịkal ga-agwa gị na NMN nwere nnukwu mkpụrụ ndụ karịa NR. N'ihi ya, nicotinamide riboside nwere ike ime ya site na ahụ mmadụ na-enweghị mkpa ịkwatu ya molekul.
Agbanyeghị, enwere atụmanya mgbe ọmụmụ ihe gara aga gosipụtara na e nwere njem dị omimi nke na-enye kemịkalụ ahụ ohere ịgafe usoro mgbaze ahụ. Ọmụmụ ihe ọmụmụ gara aga kpochapụrụ ohere a rue mgbe ụfọdụ ndị sayensị chọpụtara protin nke Scl12a8, nke na-eme ka NMN gbanwee nicotinamide adenine dinucleotide.
Imirikiti ndị ọrụ na-ahụ nicotinamide mononucleotide ọnụahịa ga-adị elu karịa nke nke ya na riboside.
Nchọpụta Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Agbanyeghi na enwere otutu ihe omumu banyere nyocha na oke NMN mgbakwunye nyocha kemgbe ọ chọpụtasịrị na 1963, biko kwe ka m metụ aka na ọrụ ndị ama ama.
NMN kwalitere ntorobịa
Kemgbe afọ 2013, Dr. Sinclair na-arụsi ọrụ ike na ịmụ ihe Nicotinamide Mononucleotide mgbakwunye na ọrụ ya dị ka ihe mgbakwunye ịka nká. N'akwụkwọ nyocha ya, mkpụrụ ndụ ihe nketa ahụ kwuru na ọgwụgwọ ahụ mere ka akwara ike na metabolism nke ụdị ụmụ oke. Dr. Sinclair jiri arụmọrụ NMN tụnyere ịrụ ọrụ.
Site na nyocha ahụ, ọkà mmụta mkpụrụ ndụ ihe nketa Harvard edekọghị NMN mgbakwunye nsonaazụ.
Ọrụ Cardio-echebe nke NMN
N'ime nyocha emejupụtara NMN nke afọ 2014, Yamamoto na ndị otu ya kpebiri na NMN nwere akụrụngwa na-echekwa kadio. Isterhazi ihe mmezi ahụ ga-echebe obi pụọ na reperfusion na mmerụ mmerụ ahụ.
Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, De Picciotto na ndị otu ndị ọzọ banyere mkpụrụ ndụ ihe ọmụmụ chọpụtara na NMN nwere ike ịkwalite ọrụ akwara.
NMN na-akwado Neurodegeneration
N’afọ 2015, Long na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ kwuru na mgbakwunye NMN nwere ike ịgwọ ọrịa Alzheimer ma belata akara ya na-adịghị mma. Otu afọ mgbe nke a gasịrị, Wang na ndị otu ya ndị sayensị kwubiri na ọgwụgwọ ahụ ga-egbochi nsogbu nke ọgụgụ isi na nkwarụ akwara.
N'afọ ndị sochirinụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nnyocha NMN agbakwunyere iji kwado nrụpụta nke Nicotinamide Mononucleotide iji meziwanye ọrụ ọgụgụ isi.
NMN na-akwalite arụ ọrụ na ahụike
Na 2013, Mills na ndị otu ya chọpụtara na nicotinamide mononucleotide (NMN) nwere ike ijikwa ọrịa shuga nke ụdị II. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, o guzobere na mgbakwunye ahụ na-agbakọ physiology na immunological mbelata ụmụ oke. N'otu afọ ahụ, Mills na Yoshino na Imai jikọrọ aka iji mụọ otú NMN si emetụta akwara na ọrụ ya na nrụgide oxidative.
NMN Onye njem dị omimi
Imai na ndi otu ihe banyere ndu ndi mmadu choputara Slc12a8, nke n’enye aka na ntinye aka Nicotinamide Mononucleotide n’ime aru. Usoro a na - eme ngwa ngwa ma ọ dịghị ihe ọ ga - emetụta bioavailability NMN.
Kemgbe 2017, Ndị ọkà mmụta sitere na Keio (Tokyo) na Mahadum Washington na-etinyesi aka ike na ule nyocha nke NMN n'etiti ndị agadi mana ahụike.
Ebumnuche nke ọnwụnwa mmadụ a bụ igosipụta nchekwa nke nicotinamide mononucleotide na ịghọta otu mgbakwunye ahụ si emetụta ọrụ beta-cell. Na mgbakwunye, ndị ọkà mmụta sayensị nyocha ahụ chọrọ ịchọpụta ma enwere nke ọ bụla NMN emeju nsonaazụ.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Usoro ọgwụgwọ
Eleghi anya ajụjụ a na-azọ ije n'uche gị bụ "NMN ole ka m ga-ewere?" O di nma, ka m meere gi ya.
Usoro NMN a na-ahụkarị maka mmadụ bụ ihe dịka 25mg na 300mg kwa ụbọchị. N'ime ule niile dị n'ụlọ ọgwụ, isiokwu ha ga-akarị 250mg / ụbọchị.
Dr. Sinclair kwupụtara na ọ na-ewe ihe ruru 750mg nke NMN kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ site na nyocha ntinye NMN n'ịntanetị, ị ga-achọpụta na ụfọdụ ndị ọrụ na-aga 1000mg / ụbọchị. Ọ bụ ezie na enweghị ndekọ ndekọ nke mmetụta nicotinamide mononucleotide, ị kwesịrị ịrapara na ntakịrị kachasị dị ka o kwere mee.
Ọ bụ Nchekwa Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ruo ugbu a, ọ nweghị data ịkọwa Nicotinamide Mononucleotide dị ka enweghị nchekwa. Site na ihe ndekọ ndị e bipụtara n'oge ọnwụnwa ahụike, ọ dịghị isiokwu edebanyere mmetụta ọ bụla nke nicotinamide mononucleotide. Ihe kariri ihe omuma ndi ozo bu ihe iga nke oma n'enweghi ihe mgbaàmà obula.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Mmeju
Ebe ọ bụ na FDA anaghị anabata nicotinamide mononucleotide kpamkpam, ọ gaghị abụ ọgwụ ederede. Agbanyeghị, ịnwere ike iwere ya dịka emeju nri.
Agbanyeghị na inwere ike ịchọta ya n'ụlọ ahịa ọgwụ dị na mpaghara, ebe kachasị mma iji zụta ngwaahịa bụ ịntanetị. Can nwere ike zụta nicotinamide mononucleotide nnukwu ntụ ntụ maka nyocha gị ma ọ bụ gaa maka mgbakwunye nri. Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na ị na - azụ ahịa n'aka ndị ahịa so na beta-nicotinamide mononucleotide.
Iji mee ka NMN bioavailability dịkwuo elu, ịkwesịrị ịhọrọ ọgwụ sub-lingual kama mbadamba okwu.
Dabere na ụkpụrụ FDA, mmadụ chọrọ opekata mpe 560mg nke Nicotinamide Mononucleotide kwa ụbọchị. Ihe ị ga-amata bụ na broccoli na kabeeji na-edeba aha NMN kachasị elu ma e jiri ya tụnyere nri na mkpụrụ osisi ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, broccoli nwere n'etiti 0.25mg na 1.12mg nke kemịkal. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enwe ahụike ma na-a toa ntị na ihe FDA chọrọ, ị ga-eri 1500 pound nke broccoli n'otu ụbọchị. Ebe ọ bụ na ịme nke a agaghị ekwe omume, ị kwesịrị ịhọrọ ịzụrụ mgbakwunye ahụ site na beta-nicotinamide mononucleotide soplaya.
Yao, Z., et al. (2017). Nicotinamide Mononucleotide Na-egbochi JNK Ntinye aka na Ntugharị Ọrịa Alzheimer.
Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, a Key NAD (+) Intermediate, Na-agwọ Pathophysiology nke Diet na Di-Ageu Induced Diabetes na Mice. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, onye na - etiti NAD + Synthesis, na - echebe obi site na Ischemia na Reperfusion.
Wang, Y., et al. (2018). NAD + Emejupụtara Nkọwapụta Ihe Nkọwapụta Alzheimer na Nzaghachi mbibi DNA na Model Mo AD ọhụụ nke Nwetara Ndozi DNA.
Keisuke, O., et al. (2019). Nsonaazụ nke metabolism NAD gbanwere na nsogbu ọgbụgba nke metabolism. Journal nke Biomedical Sciences.
1.Gịnị mere anyị ji chọọ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
2.Gịnị bụ Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Gịnị bụ nri nwere Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
4.Kedu ihe bụ uru Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nyocha Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
7. Nicotinamide Mononucleotide (NMN) osdị
8.Ọ bụ Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Nchekwa
9.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Mgbakwunye
Black Garlic Wepụta Uru Ahụike na Ntinye
L-Ergothioneine (EGT): Nri ‐ Nweta Antioxidant nwere ọgwụgwọ ọgwụgwọ